Farmaajo Oo Ka Hadlayey Caleemo Saarka Xaaf: “2 sano waa yar tahay, 4 sano waa yar tahay”!! – Goobjoog News
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo ka hadlayey xafladda caleemo saarka madaxweynaha Galmudug Axmed Geelle Xaaf ayaa u mahadceliyay baarlamaanka Galmudug sida saxda ah ee ay u doorteen Xaaf, waxaa kale uu u mahadceliyay dadkii uu ka guuleystay madaxweynaha la doortay oo natiijada aqbalay.
Madaxweynaha cusub ee Galmudug waxaa uu ku sheegay nin magac ku leh ganacsiga oo hadda ku soo biiray siyaasadda, waxaa uu ku dhiirigeliyay in uu u adeego shacabka, xusuusiyana in mas’uuliyadda aaney wax sahlan aheyn.
Mudane Farmaajo waxaa uu Xaaf kula taliyay in uu wax ka qabto ballan-qaadyadii uu umadda u sameeyay sida Waxbrashada, caafimaad-ka, amniga, cadaaladda, horumarinta, dhaqaalaga iyo wixii la mid ah.
Madaxweynaha Soomaaliya waxaa uu xusuusiyay in loo baahan yahay in uu wax ka qabto cadaaladda, dhismaha xabsiyada si umadda u kala badbaado, waxaa uu jeediyay in laga fogaado khilaafka iyo nin jecleysiga.
Madaxweyne Farmaajo waxaa uu ka hadlay khilaafaad ka jira dowladda federaalka ah dhexdeeda, waxaa uu sheegay in khilaaf la’aanta iyo xasiloonida Djibouti ay keentay in uu furo dekad ku baxday 400 Milyan oo ah dekadda 4 jeer ka weyn dekadda Muqdisho.
Waxaa Farmaajo ka hadlay in uu khilaafka dartiis uu u xallin waayey Galmudug iyo Ahlu sunna, oo marka hore uu ka bilaabay heshiisiinta heerka 1aad iyaga oo heerka 2aad marayana ay doorashada dhacday o oo ka gaari waayeey.
Mudane Farmaajo waxaa uu madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug kula taliyay in ay ka shaqeeyaan nabadda, dib u heshiisiinta iyo khilaaf la’aan dowladda dhexdheeda ah, Waxaa uu si gaar ah Xaaf iyo Gaas kula dar-daarmay in ay ka shaqeeyaan isu socodka gobolladaasi.
Madaxweyne Farmaajo waxaa uu ka hadlay in dalka Sacuudiga uu ballan-qaaday in Soomaaliya ka hirgelin doono Airport, dhismaha guryaha dowladda, jidad, goobo waxbarasho, caafimaad, amni iyo dhammaan baahiyada jira oo aan xad laheyn
Madaxweynaha waxaa uu sheegay in 27 sano oo dhibaato ah kadib laga gudbay in xoog kursi lagu yimaado, waxaa uu intaa raaciyay in dalalka Carabta ay hadda Soomaaliya ugu daydaan dimoqoraadiyadda
“2 sano waa yar tahay, 4 sano waa yar tahay” ayaa hadaladiisa ka mid ahaa isaga oo sheegay in loo baahan yahay in dowladda loo adkeysto oo aan wax dumin iyo mooshin lagu boodin, waxaa Farmaajo ku dooday in Umadda mooshin uma shaqeyno, gaajo iyo cudur uma shaqynaayo.
Madaxweynaha Soomaaliya waxaa uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay garab istaagaan dowladda iyo in ay wada shaqeeyaan dowladda federaalka ah iyo dowlad gobleedyada oo taasi ay caalamka arkaan.
Qarax Ka Dhacay Ciraaq Oo Ay Dad Ku Dhinteen
Dowladda Australia Oo Kaalmo Bani’aadanimo Siineysa DalalKa Ay Abaaraha Ka Jiraan